Kana iwe uchitanga yako Windows 10 komputa, uye inoomerera paNdapota tarisai, ”Screen ipapo heino maitiro aungagadzirisa nyaya yacho. Mushure mekutanga komputa, mazhinji masevhisi ehurongwa anotanga kunyangwe usati iwe wagona kupinda mukombuta. Services zvine chekuita neNetwork, Mushandisi Interface, nezvimwe zvinofanirwa kuve zvakagadzirira nenguva yaunosvika desktop yako.
Kana iwe ukaona kuti yako kombiyuta skrini inonamira pane Chikumbiro chekumirira skrini, saka pane matanho anozokubatsira. Pane ino skrini, haugone kushandisa ALT + CTRL + DEL uye saka sarudzo chete yauinayo ndeyekutanga zvakare komputa.
Kumanikidza otomatiki Kutanga Kugadziriswa
Disable vamwe Windows Services
Rollback Shanduko kana kuita System Kudzorera.
1] Kumanikidza otomatiki Kutanga Kugadziriswa
Zvaingave zvakanaka kushandisa a Windows 10 Inotakura USB drive kudzora mumodhi yakachengeteka, asi uchifunga kuti haugone kuwana chero imwe kombiyuta, ngatimanikidze izvi.
Kutanga, dhonza kunze madhiraivha, paripherals, nezvimwe, mirira kweminiti uye simba pane yako system.
Iye zvino ,manikidza shutdown- uye ipapo simba pa - komputa yako katatus mumutsara. Iwe unogona kuita izvi nekutanga kuvhura pakombuta uye nekukurumidza nekudzvanya bhatani remagetsi zvakare, asi panguva ino, chengetedza. Iyo inodzima komputa. Kana iwe uri kushandisa desktop, unogona zvakare kudzima kubva kune magetsi. Dzokorora izvi katatu.
Inotevera nguva yaunotanga komputa, ichavamba iyo Otomatiki Kutanga Gadziriso maitiro, iyo inozopedzisira yovhura iyo Yepamberi Kudzoreredza modhi.
Enda kuTransleshoot wobva wasarudza Mode Yakachengeteka.
2] Dzivisa maSevhisi
Kamwe kombiyuta painopinda mu Safe mode, unofanirwa kudzima matatu maseti-
Windows Kukanganisa Kuzivisa Sevhisi,
Network Chinyorwa Service
Network Nzvimbo Kuzivisa.
Kuti uite izvi, vhura Runokurumidza uye nyora services.msc, uye wobva wadzvanya Enter Enter.
Ichavhura Windows Maneja weSevhisi.
Tsvaga masevhisi ataurwa, uye tevera matanho kune rimwe nerimwe rebasa.
Tinya kaviri kuti uvhure zvivakwa zveSevhisi
Misa kana sevhisi iri kushanda
Chinja chinyorwa charo chekutanga kuti Chiremara
3] Rollback Shanduko kana kuita System Kudzorera
Paunenge uchidzokera kubhobho yakajairwa, iyo, Ndapota tarisai skrini haifanire kubatirira kwenguva yakareba, uye iwe unofanirwa kuwana iyo-kupinda-screen kana desktop kana pasina password yakaiswa.
Ndichiri kuda kutaura izvi zvisati zvaitika, asi ikozvino zvawave pano, unofanirwa kutsvaga chikonzero. Kana paine shanduko yawakaita kumakomputa nyaya isati yaitika ungangoda kuidzosera. Kana iwe uchikwanisa kuziva, zvichave nyore kugadzirisa chikonzero. Kana zvisiri, sarudzo yakanakisa ndeye dzorera kombiyuta yenyu kune yakamboshanda nyika.
ZANO: Pane mamwe mazano pano anogona kukubatsira iwe kana yako Windows 10 yakabatirira pakutakura imwe skrini.
Ndinovimba ino post yakanga iri nyore kunzwisisa, uye iwe wakakwanisa kupfuura Windows 10 namatira Ndapota tarisai Screen.